Ukubuyekezwa kokucabanga nokubhujiswa - i-Word Foundation
Ukubuyekeza kokucabanga nokubhujiswa
Ukucubungula nokuBhukulwa kweBhuku Ukubuyekeza
Umlayezo wami kuphela owaziwa ngokuthi "Ngiyabonga." Le ncwadi iye yathinta indlela yami, yavula inhliziyo yami futhi yangijabulisa engqondweni yami! Ngiyavuma ukuthi ubunzima bezinye izinto ziyinselele kimi futhi angisakwazi ukuqonda ngokugcwele ezinye izinto, uma kungenjalo. Kodwa, lokho kuyingxenye yesizathu sami sokujabula! Ngifunda ngayinye ngithola ukuqonda okungaphezulu. UHarold ungumngane enhliziyweni yami, nakuba ngingenelungelo lokuhlangana naye. Ngiyambonga isisekelo sokwenza le ncwadi mahhala kulabo abayidingayo. Ngiyabonga ngokungapheli!
I-Percival Ukucabanga Nekusasa kufanele iqede ukucinga okubalulekile kokufuna ulwazi olunembile olubhalwe ngokuphila. Umbhali ubonisa ukuthi uyazi ukuthi ukhuluma ngani. Alukho ulimi lwezenkolo olungenangqondo futhi akukho okucatshangelwayo. Ngokungafani nalolu hlobo, uPercival ubhale lokho akukuziyo, futhi uyazi okuningi - ngokuqinisekile ngaphezu kwanoma yimuphi omunye umbhali owaziwayo. Uma uzibuza ukuthi ungubani, kungani ulapha, uhlobo lendawo yonke noma incazelo yokuphila ke i-Percival ngeke ikuvumele. Okuthakazelisayo ngokukhethekile izincazelo zakhe eziningi ezicacisa izihloko ezinjalo ezingavamile njengezono zangempela, ukukhulelwa okungacacile, ukuwa komuntu kanye nesizathu sobulili. Izimpendulo zakhe kule mibuzo ziyizicucu, zinegunya futhi ziyamangalisa. Umgwaqo ongaphambi komuntu ngamunye wokucabanga uyenziwa ngokucacile futhi ukuchazwa kwakhe kweNgcono eNkulu kubonakala njengendlela engcono kakhulu ebhaliwe. Kunomqondo ngemininingwane futhi kuvezwe ngokucacile, njengawo wonke umsebenzi omuhle I-Percival inciphisa i-tome yakhe ezimisweni noma yikuphi umuntu oqotho ongaqonda futhi akwenze. Into eyodwa ngokuqinisekile: emva kokufunda Ukucabanga ne-Destiny uzobe uhambisa imibono ezokwenza ikubhekise ekusasa lakho langempela. Yilungele!
Ngokuqinisekile Ukucabanga Nekusasa kuyinto isambulo esiyingqayizivele esibalulekile esikhathini sethu.
Ububanzi nokujula Ukucabanga Nekusasa lukhulu, kodwa ulimi lwalo lucacile, luqondile, futhi luthatheka. Le ncwadi ingeyokuqala ngokuphelele, okusho ukuthi ivela ngokusobala ekucabangeni kukaPercival uqobo, ngakho-ke ingeyendwangu ephelele, iyahambisana kuyo yonke. Akacabangi, akacabangi noma aqagele. Akenzi izinkulumo ezikhulunywayo. Kubonakala sengathi alikho igama elivela endaweni, alikho igama elisetshenziswe kabi noma elingenakubaluleka. Umuntu uzothola ukufana nokwandiswa kweminye imigomo nemibono eminingi equkethwe esifundweni seWestern Wisdom Teachings. Umuntu futhi uthola okuningi okusha, ngisho neveli futhi uzokuphonsela inselelo ngakho. Kodwa-ke, kungaba ukuhlakanipha ukungagijimeli ekwahluleleni kepha uzibambe ngoba uPercival akakhathazekile ngokuzivikela ekungajwayelekeni komfundi ngezihloko njengoba kunjalo ngokuvumela umqondo wesethulo sakhe ukuba ulawule isikhathi nokulandelana kokudalulwa kwakhe. Ukunxusa kukaHeindel ku- "Word to the Wise" kungafaneleka ngokufanayo lapho kufundwa uPercival: "kuyanxuswa ukuthi umfundi agodle zonke izinkulumo zokudumisa noma ukusola kuze kube ukutadisha umsebenzi kumenelise ngokufanelekile ngokufaneleka kwawo noma ukwehliswa kwawo."
Le ngenye yezincwadi ezibaluleke kakhulu ezake zabhalwa emlandweni owaziwayo nongaziwa wale planethi. Imibono nolwazi kushiwo ukuthi kunxusa ukucabanga, futhi "kunendandatho" yeqiniso. U-HW Percival ungumuntu osebenzela abantu ongaziwa, njengoba izipho zakhe zemibhalo zizokwembula, lapho kuphenywa ngokungakhethi. Kuyangimangaza ukungabi bikho kobuciko bakhe obuningi ezinhlwini eziningi "ezinconywayo zokufunda" ekugcineni kwezincwadi eziningi ezibucayi nezibalulekile engizifundile. Ngempela ungomunye wemfihlo ezigcinwe kahle emhlabeni wamadoda acabangayo. Ukumamatheka okumnandi nemizwa yokubonga isuswa ngaphakathi, noma nini lapho ngicabanga ngalowo muntu obusisiwe, owaziwa emhlabeni wabantu njengoHarold Waldwin Percival.
Angikaze ngikuqonde ngempela, ngize ngithole Ukucabanga Nekusasa, indlela esizenze ngayo ukucabanga kwethu.
Ukucabanga Nekusasa weza kahle Imali ayikwazanga ukuyithenga. Ngangikufuna konke ukuphila kwami.
Kwakungakaze ngiqale ukutadisha Ukucabanga Nekusasa ukuthi ngibone intuthuko yangempela evela empilweni yami.
Ukucabanga Nekusasa nguHW Percival ingenye yezincwadi eziphawuleka kakhulu ezake zabhalwa. Iphathelene nombuzo wakudala, uQuo Vadis? Sivelaphi? Kungani silapha? Siyaphi? Uchaza ukuthi imicabango yethu iba kanjani yisiphetho sethu, njengezenzo, izinto, nezehlakalo, ezimpilweni zethu. Ukuthi ngamunye wethu unesibopho sale micabango, nemiphumela yayo kithi nakwabanye. UPercival usikhombisa ukuthi lokho okubonakala "njengesiphithiphithi" ezimpilweni zethu zansuku zonke kunenjongo nokuhleleka okungabonakala uma sizoqala ukugxilisa ukucabanga kwethu, bese siqala Ukucabanga Kwangempela, njengoba kuvezwe kubuciko bakhe. UPercival uqobo uyavuma ukuthi akayena umshumayeli noma uthisha, kepha usethula nge-cosmology esekwe ku-Intelligence. Umkhawulo Wokuhleleka Nenjongo. Ayikho incwadi ethandwayo eye yaveza imininingwane ecacile, emfushane, etholakala kule ncwadi. Iphefumulelwe ngempela futhi iyakhuthaza!
Ukucabanga Nekusasa kumane kumangalisa kimi. Kungenzele izwe elihle futhi ngokuqinisekile impendulo yalesi sizukulwane esiphila kuso.
Ngomuntu siqu, ngicabanga ukuthi ukuqonda okuhlakaniphile-okujulile-nolwazi olunembile nolwazi olucacile oluqukethwe Ukucabanga Nekusasa Ngu-HW Percival akatholakali. Iphakamisa kakhulu abalobi abakhulu ezinkolweni zomhlaba, uma kuqhathaniswa noPercival, kubonakala kungacacile, kungavumelani futhi kudideka. Ukulinganisa kwami ​​kusekelwe ekucwaningeni kweminyaka ye-50. YiPlato kuphela (uyise wefilosofi yaseNtshonalanga) noZen Buddhism (okuphambene nalokho) eze eduze nanoma yiPercival, ohlanganisa ngokubili ngendlela ecacile nephelele!
Ngempela uPercival 'wahlaba leveli,' futhi incwadi yakhe yavula izimfihlo zendawo yonke kimi. Ngangilungele ijaji elincane noma i-boneyard lapho nginikezwa le ncwadi.
Ukucabanga Nekusasa kuyisibonelo esihle kakhulu ngezihloko ezihlukahlukene zezinto eziphathelene nokuziphendukela kwemvelo futhi kuyinto ye-encyclopedia kule ndaba. Nginesiqiniseko sokuthi ngizoqhubeka ngibhekisela kuzo ezinkulumweni zami nasemsebenzini wami.
Ngiye ngifunda izifundo eziningi iminyaka futhi le ndoda yayinayo futhi yazi ukuthi ingahlanganiswa kanjani konke futhi ibeke ukucekelwa okucebile kokuphila nokuthi singobani / asikho.
Naphezu kokufundwa kwami ​​okujulile kuTheosophy nakwezinhlelo eziningi zokucabanga, ngisazizwa kanjalo Ukucabanga Nekusasa iyincwadi ephawuleka kakhulu, ephelele kunazo zonke, futhi engavamile kakhulu yokuqonda yohlu lwayo. Ngumqulu owodwa owodwa engangiyohlala nami, uma ngabe ngingaba nesizathu esithile sokuhlukaniswa kwazo zonke ezinye izincwadi.
Ngifunde Ukucabanga Nekusasa izikhathi ezimbili manje futhi akakholelwa ukuthi incwadi enjalo enhle ikhona ngempela.
Emashumini ambalwa adlule ngiye ngafunda kakhulu izifundo ezihlukahlukene eziphathelene nomuntu womqondo ngomqondo omncane kanye nomqondo omkhulu kakhulu. Ngako-ke, ezimbalwa ezikoleni nasemisebenzini engangiyifunde yayinezinzuzo zokunikela ngokuphathelene nomuntu wangempela nesiphetho sakhe. Futhi ngolunye usuku oluhle engangena ngalo Ukucabanga Nekusasa.
Njengengqondo ye-psycho-physiotherapist, ngisebenzise uMnu. Percival ukuqhubeka nokuphulukisa nokuqonda kwabantu abaningi abadidekile-futhi kusebenza!
Mina nomyeni wami bobabili sifunda izingxenye zezincwadi zakhe nsuku zonke, futhi sithole ukuthi noma yini eqhubekayo, kungakhathaliseki ukuthi ingaphakathi noma ngaphandle, ingachazwa ngemicabango yakhe yeqiniso. Ubeke ukuhleleka kokubonakala okungenangqondo engikuqaphela ukuqhubeka nami nxazonke. Izisekelo ezizungezile zizinzile zibe nokuthula ngaphandle kokuthuthumela. Ngiyakholwa Ukucabanga Nekusasa cishe incwadi enhle kunazo zonke ebhalwa phansi.
Sonke sizwile lezi zicaphuno ezimbili izikhathi eziningi, "Ngakho konke okutholayo, thola ukuqonda," futhi "Umuntu wazi ngokwakho." Angazi omunye okungcono ukuqala ukuthola lokhu kuphelela kunomsebenzi kaHarold W. Percival